Manchester United oo Ka Badisay Kooxda Liverpool “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Manchester United oo Ka Badisay Kooxda Liverpool “SAWIRRO”
Kooxda Manchester United ayaa galabta garoonkeeda Old Trafford 3-0 uga badisay Liverpool oo xifaaltan adag uu ka dhaxeeyo.
Kooxda Manchester United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 12-aad ee ciyaaarta u dhaliyay ciyaaryahan Wayne Rooney.
Ciyaaryahan Juan Mata ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester United,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Liverpool ayaa sameysay isku dayo badan,laakiin gool hayaha kooxda Manchester United David De Gea ayaa ka badbaadiyay.
Ciyaaryahan Robin van Persie ayaa daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Gool hayaha kooxda Manchester United David De Gea ayaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsan ciyaarta,ka dib markii uu kubado badan ka badbaadiyay kooxda Liverpool.
Kooxda Manchester United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 31-dhibcood,halka kooxda Liverpool ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 21-dhibcood.
Baarlamaanka oo su’aallo weydiiyay Xeer ilaaliyaha guud iyo Hanti dhawrka Qaranka
Wafdi ka socda Midowga Yurub oo kulamo la qaatay Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba